यिनै हुन् प्याराग्लाइडिङ तालिमको क्रममा फेवातालमा ज्या’न गु’मा’एका नेपाली सैनिक जवान राजाराम ! – Khula kura
यिनै हुन् प्याराग्लाइडिङ तालिमको क्रममा फेवातालमा ज्या’न गु’मा’एका नेपाली सैनिक जवान राजाराम !
प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षणका क्रममा दु र्घटनामा परी नेपाली सेनाका एक जवानको मृ त्यु भएको छ ।
सेनाले पोखरामा सञ्चालन गरिरहेको प्याराग्लाइडिङ तालिमका क्रममा सोमबार दिउँसो २ः१५ बजे फेवातालमा खसेका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका सैनिक जवान २३ वर्षीय राजाराम मगरको साँझ उपचारका क्रममा मृ त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुर्घटनालगत्तै सेना र सशस्त्र प्रहरीले मगरलाई उद्धार गरी पोखरा–११ रानीपौवास्थित सैनिक अस्पताल पु-याएकामा उपचारका क्रममा साँझ ४ः४५ बजे नि धन भएको हो ।
उहाँ सेनाको कालीजङ्ग गणमा कार्यरत रहनुभएको बताइन्छ । मृ तकको श व सैनिक अस्पतालमा नै रहेको र परिवारका सदस्य आएपछि बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
सेतो पाटीका अनुसार राजारामको कार्यक्षेत्र पोखरामा थिएन। उनी कार्यरत कालीजंग गण अहिले रसुवामा कार्यरत छ। गत दसैंमा छुट्टीमा घर पुगेका थिए, राजाराम। उनका बुवा कुलबहादुर राना मगरका अनुसार राजारामले त्यतिबेला १५ दिनको छुट्टीमा आएको बताएका थिए।
घर बसेको १०/१२ दिनमै राजारामलाई पल्टनबाट फोन आयो। तालिमका लागि पोखरा जान उनलाई आदेश आयो। उनी दसैं मानेर पोखरा हानिए। त्यसपछि तालिममा सहभागी भए।
‘राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि यो तालिम चलाएका थियौं, खेलाडी छनोटका क्रममा दुर्घटना भयो,’ पौडेलले भने। राजाराम सेनामा भर्ती भएको बल्ल ४ वर्ष पुगेको थियो। धादिङमा कक्षा १२ पास भएपछि उनी सेनामा भर्ती हुन रौतहट पुगेका थिए। त्यहीँबाट राजाराम सेनामा छनोट भएका थिए।
राजारामको मृत्यु भएपछि उनका बुवा कुलबहादुर, आमा राधाकुमारी र दाजु ऋषि अहिले पोखरा आएका छन्। उनीहरूलाई नेपाली सेनाले नै पोखरा ल्याएका हुन्। राजारामसँगै प्याराग्लाइडिङ तालिम लिइरहेका जवानहरू पनि प्रतिष्ठानको पोष्टमार्टम भवनमा पुगेका थिए।
अव त्यस्तो गल्ती गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली